नेपालको संसदमा कसरी छिर्यो बेलायती कुर्सी ?
२०४८ सालमा तत्कालीन संसदमा विदेशी सहयोगको वर्षा हुने भयो । विभिन्न मुलुकहरुले संसदमालाई सहयोग गर्ने भए । तर, त्यसबेलाको सरकारले कडा अडान लियो, संसदमा विदेशी सहयोग नलिने भनेर ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को क्षेत्रीय मुख्यालय थियो । मुख्यालयले केही सांसदहरुलाई दिल्ली भ्रमण गरायो ।
आईएलओ १६९ को प्रचार प्रसार गर्ने भन्दै आईएलओले विभिन्न एनजीओ तथा वकिलहरुको एनजीओलाई पनि ठूलो रकम सहयोग दियो । त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा जातीयकरण झन् चर्को भएको थियो ।
संसदमा विदेशी सहयोग घुस्न नदिने नेपालको पूरानो नीति वर्तमान सरकारले पुनर्जिवित गर्न आवश्यक छैन त ? (सरल पत्रिका आर्काईभबाट)
२०७५ माघ २७ आइतबार १७:३५:०० मा प्रकाशित